Iindleko eziPhakamileyo zokuYilwa kweWebhu ziqheleke kakhulu | Martech Zone
Xa ufunda la manani mabini, uya kothuka. Engaphezulu kwe I-45% yawo onke amashishini awanayo iwebhusayithi. Kwaye i-DIY's (Do-It-Yourselfers) eqala ukwakha indawo, I-98% yazo iyasilela kupapasho inye kwaphela. Oku akubali nenani lamashishini anewebhusayithi engahambisi phambili ekhokelela… endikholelwa ukuba yenye ipesenti ebalulekileyo.
le infographic evela kwiWebydo ikhomba umba ophambili kuyilo lwewebhu olungaphumelelanga kunye nokuntsokotha kwezisombululo kunye nemfuno yokulinganisela phakathi koyilo kunye nophuhliso oluninzi. Yongeza kuloo nto inani labafundi kunye nezixhobo ezibuthathaka abanazo, kwaye ichaza intshabalalo yenani eliphezulu lamashishini.
Phakathi kwezisombululo ze-DIY kunye neqonga lokuthengisa umxholo we-B2B, icandelo lesithathu liyavela, ngethemba lokuphazamisa intengiso yoyilo lwewebhusayithi. IWebydo Isisombululo esizimeleyo se-B2B sabaqulunqi abaziingcali abanqwenela ukwenza iiwebhusayithi eziphambili kubathengi babo, kuyilo lwesiko olulungiselelwe ngaphandle kokubhala nokuba ngumgca omnye wekhowudi okanye ukuqesha abaphuhlisi.
Khange ndiyisebenzise iWebydo kodwa ndikhangele phambili ukuyithatha ndayivavanya. Mhlawumbi ingxaki yam kukuba ndingumakhi ngaphezu komyili. Ndidla ngokufumana inkuthazo yoyilo lwabanye abantu kwaye ke ndiyibandakanye kubukho bethu bewebhu. Ndonwabile ngophuculo oluqhubekayo kwishishini, nangona kunjalo, kunye nokukwazi kwabo ukwakha izisombululo eziguqukayo nge hlela endaweni kwaye yitsale uyiwise amandla.
Ndiyakunyaniseka ukuba andikhathali ukuchitha imali kuphuhliso. Ngapha koko, sihlala sisebenza ngasemva kwabaqulunqi abahle kakhulu ekwakheni ukuphunyezwa ngokukhawuleza kunye nokuguquguquka ngakumbi kuyilo lwabo. Amaphepha amabini anokujongeka ngokufana, kodwa isiseko esisiseko kunye nokwenza iikhowudi kunokwenza umahluko omkhulu kwisantya sephepha kunye nokuziphatha kwabathengi.
Andikholelwa ukuba eyona ngxaki inkulu ejongene nomzi mveliso woyilo lwewebhu zizixhobo, ndiyakholelwa ukuba yiyo Ixabiso lomsebenzi. Kwiminyaka emininzi eyadlulayo, ndabona isithethi esithetha ngenkampani echithe amakhulu amawaka eedola ukuyila inkampani yazo, kodwa incinekile ekusebenziseni iqhezu lolo kwiwebhusayithi yazo. Iwebhusayithi yakho yindawo yakho yokulinda kwihlabathi. Awunayo ingcinga yesibini malunga ne-ROI yesingqengqelo kwigumbi lakho lokungenisa, kodwa uyi-nickel kwaye unciphisa uyilo lwewebhu kunye nenkampani yophuhliso. Akunangqondo kwaphela.
Sibonile isandla sokuqala sigqithisile. Sisebenze neenkampani ezazinekhaya lasekhaya, indawo ye-DIY engakhange ifumane zithuthi kwaye kungekho zikhokelo… ibiza inkampani kumakhulu amawaka okanye kwizigidi zeedola kwishishini. Kwaye sizibonile ezinye iinkampani zivuthela uhlahlo-lwabiwo mali kuyilo oluhle olungenaso isicwangciso sokufumana amathemba, ukugcina abathengi, kunye nokuzithengisa.
Uninzi lwemali yethu aluchithwa ekuphuhliseni iisayithi zabathengi bethu. Rhoqo kunokuba kungasebenzi Hlalutya indlela esinokuphucula ngayo isabelo sabo sentengiso kunye nokuqhuba ngakumbi ishishini kumgca ongezantsi. Yimali esetyenziswe kakuhle leyo! Sakha iindawo ezintle kubathengi ngeqhezu leendleko kunye nexesha lee-arhente ezininzi… umahluko kukuba eyethu ivelisa ngeniso!
Ukuba uyilo lewebhu, jonga IWebydo! Kuvakala ngathi yinkqubela phambili enomdla kwishishini.
tags: iiwebhusayithi ezingahlawulwayob2b abayilib2b abaphuhlisiUyilo lwe-b2c yewebhuCMSuyilo lwewebhu loyiloabaqulunqi xa kuthelekiswa nabaphuhlisidotnetnukedrupaljimdoJoomlaMagentooscommerceabayili abaziingcaliabaphuhlisi abaziingcalisquaeveraceubracokuyilo webUhlahlo-lwabiwo mali lwewebhuIcandelo loyilo lwewebhuUyilo lwewebhuiiwebhuUhlahlo-lwabiwo mali lwewebhusayithikwiwebhusayithiwebokuewebhuwixWordPressyamla
Jul 7, 2015 ngo-3: 17 PM
Inika umdla kakhulu. Kudala ndicinga ngale nto kakhulu kodwa ngokwembono 'uyinceda njani i-SMB engacacanga ukuba iphucule i-ROI yentengiso yazo?' Ngaba ungayithanda ngenene ingxelo yakho kule bhlog ipostiweyo.